ओमानको क्रिकेट टोलीमा रहेका नेपाली... :: मनोज सत्याल र विवेक राई :: Setopati
मनोज सत्याल र विवेक राई काठमाडौं, फागुन १
ओमानको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा रहेका नेपाली मूलका विकेटकिपर/ब्याट्सम्यान सुरज कुमार। तस्बिर : सेतोपाटी
सायद नेपाली क्रिकेट प्रतिबन्धमा नपरेको भए ओमनको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान सुरज कुमार यतिबेला नेपाली राष्ट्रिय टोलीमा विकेटकिपिङ गरिरहेका हुन्थे। दायाँ हाते ब्याट्सम्यान सुरज सम्भवत नेपालका ओपनिङ ब्याट्सम्यान पनि हुन्थे।
सन् २०१२ सम्म ओमानका खेलाडी सुरज र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका महत्वपूर्ण बलर सोमपाल कामी भारतमा क्रिकेट खेल्थे। सुरज ब्याटिङ र किपिङ गर्थे। उनी ओपनर थिए। सोमपाल बलर थिए। उनीहरू दुईको जादु पञ्जाबका स्थानीय क्लबहरूमा देखिन थालेको थियो। कहिले दुवैले एउटै टिमबाट खेले,कहिले फरक फरक टिमबाट। सोमपाल पटियालाबाट खेल्थे। सुरज जालन्धरबाट। त्यतिबेलासम्म सुरज र सोमपाल मिल्ने साथी भैसकेका थिए।
नेपालबाट क्रिकेट खेल्न प्रस्ताव आएपछि एकदिन सोमपाल काठमाडौं हान्निए।
तर सुरजलाई नेपाल आउने मौका जुरेन। परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाको समस्यासँग जुधिरहेका सुरज नेपाल आएर कहाँ बस्ने, के खाने, कसरी बाँच्ने भन्ने समस्यामा थिए। बाग्लुङको बुर्तिबाङ पुर्ख्यौली घर भए पनि सुरज भारतमै जन्मिएका थिए। बुवाआमा दैनिक काममा जान्थे। पारिवारिक अवस्थाले सुरजलाई सधैं क्रिकेट भनेर सपना पछ्याउने छुट थिएन।
सोमपाल भने त्यतिबेलासम्म नेपाल आएर क्रिकेट खेल्न थालिसकेका थिए। नेपाली पत्रपत्रिकामा सोमपालको बलिङले प्रशंसा कमाउन थालिसकेको थियो। त्यसो त सोमपालले सुरजलाई नेपाल ल्याउने कोशिस नगरेका होइनन्।
तर सुरज प्रश्न गर्थे - कति कमाउँछस्? नेपाल क्रिकेट खेल्दा ५० हजारदेखि १ लाख कमाइ हुन्छ?
सोमपाल जवाफ दिन्थे - पैसा त खासै छैन।
त्यतिबेला सोमपाल आफैं पनि काठमाडौंमा बस्ने खाने बन्दोबस्त मिलाउँदै थिए।
तर राम्रो ब्याटिङ क्षमता भएका सुरजलाई सोमपाल नेपाल भित्र्याउन चाहन्थे।
'त्यतिबेला जगत गुरु (जगत टमाटा) र पबुदु सर (पबुदु दासानायके)सँग सुरज नेपाल आउने कुरा भएको थियो', सोमपाल सम्झन्छन्, 'तर नेपालको क्रिकेट प्रतिबन्धमा परेपछि सुरज क्लब क्रिकेट खेल्न नेपाल आउन पाएन।'
सुरजले ८ वर्षकै उमेरमा क्रिकेट सिकेका थिए। खेल्दाखेल्दै उनी भारतको क्लब क्रिकेट खेल्ने खेलाडी बने। अनि भारतको जिल्लास्तरीय खेलाडीसम्म बन्न पुगे। तर वर्षेनी हजारौं क्रिकेट खेलाडी उत्पादन हुने भारतमा क्रिकेट खेलाडी बन्न चानचुने योग्यता र क्षमताले पुग्दैन थियो।
तर सुरजको दिमागमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने अटुट ध्येय थियो। सुरजलाई नेपाल आउने मन नभएको होइन।
सानैदेखि क्रिकेट सिकेका सुरजको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने सपना थियो। नेपाल आउन नमिलेपछि उनी त्यही सपना पछ्याउँदै सन् २०१५ मा ओमान पुगे। ओमनको एउटा कम्पनीले सुरजलाई क्रिकेट खेल्नुपर्ने र सँगै काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। आकर्षक प्रस्तावले सुरजको यात्रा भारतबाट ओमानतर्फ मोडियो।
किस्मतको खेल, उनै सुरजले पहिलोपटक सन् २०१८ मा नेपालविरूद्धकै म्याचबाट ओमानको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट डेब्यू गरे। तर त्यो खेलमा उनले राम्रो ब्याटिङ गर्न सकेनन्। तर सन् २०१९ को अक्टोबरमा ओमानमै भएको पेन्टागुलर सिरिजमा पुन: सुरजले नेपालविरूद्ध ओमानबाट खेले। उक्त खेलमा उनले नटआउट ४२ रन बनाए। ओमानले खेल ६ विकेटले जित्यो।
यसपटक कीर्तिपुरमै आएर सुरजले नेपालविरूद्ध खेले। तर उनी दोस्रो बलमै सुसान भारीको स्पिनमा ज्ञानेन्द्र मल्लको हातबाट क्याचआउट भए।
नेपालविरूद्ध रन बनाउन सकेनन्। दोस्रो खेलमा भने उनको ब्याटिङको पालै आएन।
अमेरिका विरूद्धको खेलमा भने सुरजले नटआउट ३३ रन बनाए। सुरज नेपाल खेल्न आएपछि उनको बुवा/आमा समेत भारतबाट खेल हेर्नै नेपाल आए।
'मेरो बुवाआमा नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँहरू बाग्लुङ बुर्तिबाङबाट पञ्जाबको जालन्धर पुग्नु भएको हो', सुरज सम्झन्छन्, 'मेरो जन्म भारतमा भए पनि मेरो परिवारमा अहिले पनि नेपाली बोलिन्छ।'
बुबा आमा आफ्नो खेलबाट खुसी भए पनि सँगसँगै नेपालको जितको कामना गरेको सुरज बताउँछन्।
'मेरो आमाबुवाले आफ्नो सन्तानले खेल जित्दा खुसी हुनुभयो। तर उहाँहरूलाई पनि नेपाल भनेको नेपाल नै हो। उहाँको लागि आफ्नो देश हो।'
उनको बोलीमा भारतीय लबज झल्किन्छ।
परिवारको आर्थिक अवस्थाकै कारण ओमान पुगेका सुरज अब भने आफ्नो बुवाआमालाई समेत ओमान लैजाने तयारीमा छन्।
सानोमा भारतबाट एकपटक बाग्लुङ आए पनि धेरै सम्झना नभएको सुरज बताउँछन्।
'म काठमाडौं पहिलोपटक आएको हुँ, यसपटक स्वयम्भू र चन्द्रागिरि गएँ', काठमाडौं एकदमै राम्रो ठाउँ छ। तर व्यस्तताले धेरै ठाउँ घुम्न पाइएन।'
सुरजले नेपालमा सोमपाललाई भेटेर विवाहका लागि बधाई समेत दिए।
त्यसो त नेपालको क्रिकेटको वातावरणले भने सुरजलाई पनि लोभ्याएको छ। ओमानमा क्रिकेटभन्दा फुटबल लोकप्रिय छ।
'मलाई नेपाली फ्यानहरू एकदम राम्रो लाग्यो। राम्रो समर्थन गरे, त्यो मायाको लागि सबैलाई धन्यवाद भन्छु।'
सुरजलाई नेपाली क्रिकेटबारे राम्रो अपडेट छन्।
'मैले डिपिएल, पिपिएल र इपिएलबारे सुनेको छु। बोलाएको अवस्थामा नेपाल आएर खेल्छु।'
तर उनलाई नेपालविरूद्ध खेल्दा मनमा कुनै चुकचुक भने हुँदैन।
'यो मेरो दायित्व हो। मैले मेरो टिमको लागि शतप्रतिशत खेल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।'
सुरजलाई अब भने नेपालबाट खेल्ने चाहना भने छैन।
'अब त एकदम गाह्रो छ। नेपालमा धेरै राम्रो नयाँ खेलाडीहरू आएका छन्। म त अब बुढो(३० वर्ष) भइहालेँ। त्यही हो नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिनुपर्यो।'
नेपाली भाषी भएका कारण नेपाल विरूद्धको खेलमा भने सुरज हुँदा ओमानको टोलीलाई फाइदा पुगेको छ।
'नेपालसँग खेल भएको बेला उनीहरूको रणनीतिबारे मैदामा कुरा हुन्छ। त्यो थाहा पाइन्छ। कुन बलमा चाहिँ हान भनिरहेको हुन्छन्। थाहा हुन्छ।'
ओमानमा भने सुरजले अहिलेसम्म नेपाली भेटेका छैनन्। तर नेपालविरूद्ध यसपटक खेल्दा भने उनले ओमानमा समेत धेरै नेपाली रहेको थाहा पाए।
त्यसो त ओमानमा सुरजको संघर्ष जारी छ।
अहिले पनि खेल नभएका बेला उनी हरेक दिन बिहानको ट्रेनिङपछि दिउँसो अफिस पुगेर काम गर्छन्। अनि फेरि खेल्न मैदान फर्कन्छन्। उनी अटो कम्पनीका सेल्स डिपार्टमेन्टमा छन्।
'म काम गर्ने कम्पनीको पनि आफ्नै क्रिकेट टिम छ। घरेलु प्रतियोगिताहरू खेल्छ। मलाई चाहिँ कामसँगै क्रिकेट पनि खेल्न पाइन्छ भनेपछि ओमान पुगेको हुँ', सुरज भन्छन्, 'मैले तीन वर्ष क्लब क्रिकेट खेलें। त्यसबीच मेरो प्रदर्शन राम्रो भयो। बल्ल ओमानको टिमले मलाई क्यापमा बोलायो।'
अहिले उनी ओमानको मिडिल अर्डर ब्याट्सम्यान हुन्। अनि मुख्य विकेटकिपर।
सुरज भारतीय पासपोर्ट बोक्छन्। ओमानमा नागरिकता पाउन निकै अप्ठ्यारो छ।
'खाडी मुलुकमा नागरिकता पाउन अझै गाह्रै छ। विवाह गरेपछि पनि १५ वर्ष लाग्छ। तर अहिले क्रिकेटका लागि करारमै छु।'
उमेरले ३१ लागेका सुरज नेपाली केटीसँग विवाह गर्न चाहन्छन्।
'नेपालीसँगै विवाह गर्ने हो। भारत नेपाल जहाँबाट भए पनि नेपाली केटी विवाह गर्ने हो', सुरजले हाँस्दै भने, 'सोमपाल भाइले त मलाई पाँच वर्षदेखि विवाह गर्न भनेको थियो। परिवारले पनि भनेका थिए। तर पहिले करियर सेट गर्छु अनि मात्र विवाह गर्छु भन्ने छ।'
सुरज नेपाली क्रिकेट अझै माथिल्लो स्तरमा पुग्नेपर्ने बताउँछन्। तर अमेरिका र ओमान विरूद्धको खेलमा नेपाललाई सोमपालको कमी भएको बताउँछन्।
'सोमपाल कामीको अभाव भयोजस्तो लाग्यो। करण केसीले राम्रो गरे तर उसलाई साथ दिने अर्को फास्ट बलर देखिएन', सुरज भन्छन्, 'नेपालको स्पिनर राम्रा छन्। सन्दीप भाइ, कुशल मल्ल र सुसन भारीले एकदम राम्रो बलिङ गर्नुभयो।'
नेपालको टिम राम्रो भए पनि फिटनेसमा ध्यान दिनुपर्ने सुरजको सुझाव छ।
'ओमानको टिम राम्रो छ। ओमानमा खेलाडीहरूले बढी फिटनेस र स्किलमा ध्यान दिन्छन्। त्यसले हामीलाई फाइदा दिन्छ।'
ओमानमा क्रिकेट खेल्न बोर्डले एकदमै सपोर्ट गर्ने सुरज बताउँछन्।
'तर नेपालमा जति क्रिकेटको क्रेज छ त्यो ओमानमा छैन। तर पनि हामीले क्रिकेट खेल्दैछौं।'
सुरज केही दिनमा काठमाडौंमा पाएको आफ्नोपनको महशुसले फेरि पनि आफूलाई नेपाल ल्याउने बताउँछन्।
'अब दुई वर्ष आउन मिल्दैन। किनभने क्रिकेट खेल्ने छु। तर आउँदो अप्रिलमा म भारत आउँदैछु र त्यतिबेला नेपाल पनि पक्कै आउँछु', सुरज भन्छन्, 'आउँदा घुम्नलाई मात्र आउँछु।'
नेपाल आउनुअघि ओमानका अन्य खेलाडीहरूले भने सुरजलाई तिम्रो देशमा कहाँ कहाँ घुमाउँछौ भनेर सोधेका थिए।
'मेरो जति पनि टिमका साथीहरू थिए उनीहरूले तिम्रो देशमा जान लागेको छौं, हामीलाई कहाँ-कहाँ घुमाउँछौं भनेर सोधे। तिम्रो घर लान्छौं कि लादैनौं भनेर सोधे। तर जान पाइएन।'
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १, २०७६, २३:२५:००